Soonka habeenkii waxa uu ka hortagaa kansarka naasaha ku dhaca - Horn Future
Daraasad cusub oo Mareykanka ayaa sheegtay in soonka laga soomo cuntada habeenkii in ka badan 13 saacadood ay noqon karto istaraatijiyad fudud oo wax ku ool ah oo ay dumarku iskaga ilaaliyaan in uu haleelo kansarka naasaha.Marka loo eego ujeedada daraasadan laga leeyahay in habeenkii la soomo habeenkii ayaa ah in la fogaado cuntada kaliya laakiinse aynan ahayn biyaha.
Cilmi-baadhayaal ayaa ku sameeyay daraasadan jaamacada( University of California) ee Maraykanka taasoo lagu daabacay natiijadeeda majallada “American Medical Association.”
Cilmibaadhayaashan ayaa waxa ay dabo gal ku hayeen 2413 xaaladood oo ah haween uu haleeley kansarka naasaha marxalado kala duwan oo noloshooda ah intii u dhaxaysay 1995 ilaa 2007, waxana milaygii cudurku haleelay da’doodu ay u dhaxaysay 27 ilaa 70 jir.
Cilmibaadhayaashan ayaa waxa ay la socdeen haweenkan xilliyada ay quudanayaan cuntada milayyada habeenkii, iyo sida ay ula xidhiidho soo noqnoqoshada kansarka naasaha intii lagu guda jiro dabagalkan, marka lagu daro geeridii uu keenay kansarka naasaha.
Cilmi-baadhayaalka ayaa waxa ay heleen haweenkii quudashada cuntada xilliyada habeenkii iska daayay in ka yar 13 saacadood in ay korodhay fursadaha haleelida kansarka naasaha 36% marka la barbardhigo kuwii iska daayay mudo ka badan 13 saacadood xilliyadii u dhexeeyay cunista qureecda iyo cashada.
Sirta ka dambeysa arrinkan ayay sheegeen cilmi-baadhayaalku in ay tahay ka fogaanshaha cuntada habeenkii in ay kaalin ku leedahay nidaaminta sonkorta dhiigga oo u ogolaanaysa nidaamka dheef-riddiqqa(metabolism)ka ee jidhka in uu ka shaqeeyo iswaafajinta wareegyada hurdada iyo toositaanka,taasoo yareysa fursadaha haleelitaanka dadka ee kansarka.
Cilmibaadhayaasha ayaa waxa ay ku soo gabagabeeyeen in cuntada sida nidaamsan loo quuto xilliyada gaarka ah iyo sugitaanka mudo dheer oo u dhexeeysa qureeca iyo cashada oo ka badan 13 saacadood in ay noqon karto istaraatijiyad fudud oo la hirgalin karo si loo yareeyo haleelitaanka kansarka naasaha.
Waxa kale oo ay tilmaameen cilimi-baadhayaalkani cunto la’aanta mudada dheer ee habeenkii in ay dhici karto in ay kaa caawiso in ay yareeyso halista haleelitaanka cudurka macaanka nuuca 2aad, cudurada wadnaha,kuwa ku dhaca xididdada dhiigga mareenada iyo nuucyada kala duwan ee kansarka.
« Why is Tariq Ramadan demonised in France?	» Riek Machar oo xaqiijiyay in uu ku laaban doono caasimada Koonfurta Sudan 18 bisha April